Eminyakeni eyishumi edlule, endleleni ngokuzumayo iphuma Scooters engavamile. Scooter amathathu kwaba design wamavukelambuso ngempela. namasondo amabili ungekho ngemuva, njengenjwayelo, kodwa phambi. Ubani lokuqala kwadingeka khona ikhanda lami, akwaziwa. Kodwa imodeli wokuqala kusukela ekuhlaselweni ukuwohloka kwezomnotho agubhayo imizwa akuzange kumenze bajabula kakhulu phakathi abathengi. Isinyathelo esilandelayo umzamo omusha.
Lapho ngaphezulu ezivamile bheka motor efanayo, kodwa, njengoba kulindeleke, ne amasondo amabili at the ezingemuva. Ake sixoxe nabanye amamodeli ukuze.
scooter ezintathu ezinamasondo
Indlela ukukhetha amasondo ukuthutha, ababili noma abathathu, ukunquma, kuncike inhloso ngawo lutholwa. Ukuze umshayeli isilinganiso isikuta ezimbili ezinamasondo kuyinto ngempela elula: kube uba ngcono ngokwanele ukuba ukushayela futhi kulula ukunqoba isiminyaminya.
Kodwa kukhona esigabeni sabantu engibathandayo isimo sikuvumela ukuba izindlela esimeme kakhudlwana, okuyinto isikuta ezintathu ezinamasondo. Abantu abadala, abantu abakhubazekile, abantu bendawo nabadobi, abazingeli kanye balimi.
Yiqiniso, imoto yokuqala enjalo athuthukiswe ngqo nabantu abakhubazekile. Design Simple siqukethe ezimbili ezingemuva futhi omunye phambi isondo.
Nokho, ezokuthutha ezintathu ezinamasondo akuyona indiva ukunaka nabalandeli zohlobo, zikhetha ATVs yakhe futhi minibike. Izizathu zalokhu ongaziwa, Uma unganakile ukukhetha prosaic:
kusukela injini kugudlukela emuva, awusebenzi liphazamisane izinyawo;
ezokuthutha esinjalo kahle bavikelekile ukungcola;
emithathu isondo ukuzinza ezimbili.
I isikuta kungaba ukuhamba ezinamasondo, ezemidlalo, noma i-traffic. Ukuze ukusetshenziswa lokuqala, ngokuvamile izinjini noma ebuthaka ukuba cubic metres 150 futhi indawo eyodwa noma ezimbili.
Cargo isikuta has a isiqu engasetshenziswa ukuba baphathe amabhokisi omkhulu, izikhwama kanye nezinye izinto. ezokuthutha okunjalo uyakwazi sidedele ayinhloko a amakhilogremu namashumi amahlanu, futhi kuyaqabukela kuze kube anamakhulu mabini.
onobuhle zokungcebeleka kanye commercial bangase babe nophahla namabhodlela nge windscreen wiper. Empeleni, njengoba lezi onobuhle kukhona Scooters, ugibele uphethiloli. Kodwa abakhiqizi abasebenza ukuthuthukiswa igesi futhi hybrid onobuhle. Ijubane ukuthuthwa kuze kube ayisithupha amakhilomitha ngehora.
Ezemidlalo model imishini namandla kakhulu. Ukufuduka kubo kuze 250 cubic amasentimitha, futhi kwezinye izimo kuze 580. Basuke emelelwa uketshezi selehlile-lokubolekwa ezine. Letindlela kufanele izinjini kaphethiloli kuphela. Uphahla lwezindlu kuzo, yebo, akwenzeki. Kodwa somoya kungenziwa enikeziwe.
Kuye ngenhloso imoto kuyinto ezintathu ezinamasondo isikuta ukunqanda eyodwa noma wonke amadiski.
Chic noma ngakho nje kudingeka?
Scooter elibiyelwe sifana isiphambano phakathi isithuthuthu nezimoto kagesi ukuhamba emafektri. Kodwa uma ubheka izinkomba intengo, lokhu ezokuthutha isiqala ukubheka okunethezeka:
Pleasure isikuta enophahla kukhona amadola amawaka amahlanu amadoda;
amaloli - dollar ayinkulungwane eziyisikhombisa;
ezemidlalo - kusuka eziyishumi izinkulungwane eziyishumi nambili.
Inani kuncike izici lobuchwepheshe imodeli. Kodwa lokhu ezokuthutha ngokusobala aliwona ezishibhile. Nakuba uma ubeka ngezinhloso ezinhle, ukubaluleka ngeke ube value. Nokho, uma ufisa, ungakwazi kalula abuthe ezintathu ezinamasondo isikuta double noma self olulodwa. Zonke izesekeli lokhu ukudayiswa. Umuntu kumelwe amane ukuthola ibhayisikili efanelekayo, ngomzamo nje omncane - futhi imoto usulungile.
Lokhu isikuta ibusa fuel kancane futhi kuwusizo kakhudlwana futhi ifomu kancane esiyingozi kwezokuthuthi ukuhamba endleleni futhi ithrekhi. Ithuluzi esisemqoka kungaba isikuta ezintathu ezinamasondo ukudoba, ukuzingela kuleli zwe.
Ngokokuqala ngqá lezi zimoto engingamazi e-Europe, futhi umkhiqizi elikhulu isikuta Piaggio eseqala ukuveza ke ezinguqulweni eziningana: Gilera Fuoco 500, Piaggio MP3 400, 250 kanye 125.
Iqiniso ukuthi izimoto ezintathu ezinamasondo uzinze ezimbili ezinamasondo, zonke kasibili impela. Imizamo ukuqala ukukhiqizwa kulolu hlobo isikuta wabonakala isikhathi esingaphezu kwesisodwa. Nokho, abazange nemizwa efudumele ngesizathu esilula umuzwa wanyamalala drive ngokutshekisa noma ligijima, kanye ukwandisa ubungako ububanzi.
scooter ezintathu ezinamasondo 'Honda Gyro "
Japanese wanquma ukuba ubhekane nezingcindezi ukungathandi abantu ngoba Scooters yokuthi amasondo zafakwa komunye nomunye eduze yasibamba lomnyango emzimbeni we isithuthuthu. Kwatholakala lapho umshayeli wenza umjikelezo, ezokuthutha insaliwe.
Yiqiniso, ngenxa engavamile isikuta zayo ezintathu ezinamasondo "Honda" uye yabakhanga abantu abaningi. Kodwa ke Ngaqala ukuqaphela ukuthi ukuzinza yayo ayiyinhle, kodwa plastic elisetshenziswa naye ukushiya noma yimiphi iminonjana uqobo phezu kwendawo egandaywe ngamatshe.
Breakthrough noma ukwehluleka futhi?
Abanolwazi bamabhayisikili futhi skuteristy uyazi kahle ukuthi skid kwi front wheel sibucayi kakhulu kunangesikhathi emuva. Uma kwenzeka ngemuva iconsi kungenzeka ukuvimbela ziba ngcono kwabhoboka, kodwa ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi drift we front wheel ngokuvamile akwenzeki. Ngakho-ke kuvela ukuthi isondo yesithathu ngemva alisiniketi ukuzinza okukhulu. Kodwa uma, kunalokho, ukuze usethe ke phambi, kucatshangwa ukuthi ukumelana kuzokhulisa ngezinye izikhathi. Ngenxa yalesi umsebenzi oluzayo enkulu onjiniyela. Futhi kulo iviyo Piaggio lashona ibhizinisi. Ngokusho inkampani bakwazi ukwenza inguqula-mbuso, futhi wethula entsha isikuta ezintathu ezinamasondo. Izibuyekezo kuze kube manje ngazo ulahlekile. Kuyobonakala ngokuhamba kwesikhathi ukuthi umqondo iphila.
On the front indawo zingabantu namasondo amabili tilting. Itshekisela kudivayisi aluminium ifakwe iziyisikhombisa izimbazo ezine zigxilé tube emaphakathi ifreyimu futhi ngemibhobho emibili Umhlahlandlela ekupheleni ngalinye, okuyinto axhunyiwe ngu ibhola amabombo kanye ukumiswa izingalo. Lapho ukuvula amasondo ayo kuya ekupheleni bar kungaba skew ngokuhlobene uzimele. Futhi nenye isondo phambi babe ukumiswa kwabo wazihlephula disc. Uma uyeka umsebenzi ejenti icushiwe, kodwa inganikwa amandla ngokuzenzakalelayo.
Revolutionary trehkolesniki motors kukhona 400 kanye 500 cubic metres, kuyashesha 150 km ngehora. I Onjiniyela zithi uhlelo ezinjalo umsebenzi kwenza lolu hlobo ezokuthutha sizinze kakhulu, ikakhulukazi uma kwenzeka izithiyo. E-Moscow, ungakwazi manje ukuthenga isethi ephelele Piaggio MP3 250 7300 euro.
Emabhayisikili Wezingane zihamba ngophethiloli mini-cross, ezemidlalo (isithombe)
Ezithuthuthwini "Stealth" - entsha isisindo-ukusebenza ratio
Isihloko sobufakazi emilandweni yezenhlalakahle nezomthetho
Ucingo ukubuyekeza Nokia 6233: incazelo, ukuqhathanisa kanye nokubuyekeza